shit - ဝစ်ရှင်နရီ
၁.၄ ဆင်းသက်လာသော အသုံးများ
enPR: shĭt, IPA: /ʃɪt/
en-us-shit.ogg noicon (file)
shit (များသောအားဖြင့် ရေတွက်မရ, အများကိန်း shits)
ဝမ်းမှထွက်လာသော အစိုင်အခဲ အညစ်အကြေး ရလဒ် (ချီး၊ မစင်) (ရေတွက်မရ, colloquial) Solid excretory product evacuated from the bowels; feces.
ချီးပြသာနာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်၊ အာရှတိုက်မှ တချို့သောမြို့များနှင့် အာဖရိကာတိုက်မှမြို့အများတို့မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင် လောရိကားများနှင့် လူတို့၏ မိလ္လာကို စုပ်ယူပြီး မြစ်ရေထဲ ချလိုက်၏။ In tackling the shit problem, the practice in most African and some Asian cities is for private lorries to suck up human waste and dump it in rivers.
ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ (ရေတွက်ရ, colloquial, in the plural, definite) (the shits) diarrhea.
သူသုံးရက်ကြာ ဝမ်းပျက်ခဲ့ရသည်။ He had the shits for three days.
အညစ်အကြေး ထုတ်ချိန်၊ (ရေတွက်ရ, colloquial) An instance of defecation.
ဒီကောင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီးမပါနိုင်ဘူးလား၊ Can'taguy takeashit in peace?
အမှိုက်၊ တန်ဖိုးမရှိ အရာ၊ (ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) Rubbish; worthless matter.
(သတိပြုပါ - ယခုအခါ- ဈေးဆိုင်များတွင် တင်ရောင်းနေသော ပလပ်စတစ်အကြည်နဲ့ သောက်ရေသန့်ဘူးတို့သည် လူတို့၏ ချီးမှ တိုက်ရိုက်ပြောင်းထုတ်သော ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းကို သုံးပြီထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်လို့ ချီးလည်းတန်ဖိုး အထိုက်အလျောက် ရှိလာပြီ။)
ဒီ အစုတ်ကို အပြင်လွတ်ပစ်လိုက်၊ Throw that shit out!
အရာများ၊ (ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) Stuff, things.
ငါ့ ကားရုံထဲက မင်း အရာတွေကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ I want your shit out of my garage.
အကောင်းဆုံး အမျိုးအစား၊ (ရေတွက်မရ, colloquial, definite) (the shit) The best of its kind.
ဒီ စပျစ်သီးတွေ အကောင်းဆုံးဘဲ။These grapes are the shit!
အဓိပ္ပါယ် မရှိ၊ နွားသိုးချီး၊(ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) Nonsense; bullshit.
သူ ပြောသမျှက အီအီတုံး တွေဘဲ။ Everything he says isaload of shit.
ယောက်ျားများကိုသာအသုံးပြုလေ့ရှိ- ရွံ့စရာ၊ မနှစ်မျို့စရာကောင်းသူ၊(ရေတွက်ရ, vulgar, colloquial) A nasty, despicable person, used particularly of men.
သူမ၏သားသည် သူမအတွက် တကယ်ကို အော်ဂလီဆန် ဘဲ။ Her son has beenareal shit to her.
ဘာမဆို -(ဆန့်ကျင်ခြင်း သဘော) (ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) (in negations) Anything.
သူ့အမြင်ကတော့ ချီးလောက်တောင် တန်ဘိုးမရှိ၊ His opinion is not worth shit. = His opinion is not worth anything.
ငါတို့မှ နေထိုင်ဖို့ ချီးတောင်မရှိဘူး။ We don’t have shit to live on. = We don’t have anything to live on.
သူက ချီးတောင် သီးချင်းမဆိုနိုင်ဘူး။ He can't sing for shit. = He can't sing for anything. = He can't sing at all.
ပြသာနာ (သို့) ခက်ခဲအခြေအနေ ၊(ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) A problem or difficult situation.
ငါ တကယ်ကို ပြသာနာတခုခု တက်နေတယ်။ I'm in some serious shit.
မနေ့ညက ညပွဲရုံမှာ ပြသာနာတခုခု တက်သွားတယ်။ Some shit went down at the nightclub last night.
ပြင်းထန်စွာ ဆုံးမ ၊(ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) A strong rebuke.
ငါ သူကို တပါတ်အတွင်း နှစ်ခါ၊ သုံးနာရီစီ နောက်ကျတာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆုံးမလိုက်သည်။ I gave him shit for being three hours late twice in one week.
အပန်းဖြေရေးနှင့်ဆိုင်သောမူးယစ် ဆေးခြောက် ။ (ရေတွက်မရ, vulgar, colloquial) any recreational drug, usually cannabis.
(solid excretory product evacuated from the bowels): crap, dirt, dung, excrement, fecal matter, feces,
ordure, poop, shite, scat, stool, turd
See also Wikisaurus:feces, Wikisaurus:nonsense, Wikisaurus:nothing.
Terms derived from shit (noun)
Burmese: ဘင် (bhang), ချေး (hkye:)
shit (နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော (comparative) more shit or shitter, အသာလွန်ဆုံး (superlative) most shit or shittest)
အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းသော၊ တန်ဖိုးမရှိသော၊(vulgar, colloquial) Of poor quality; worthless.
ဒီ ဖလင်(ရုပ်ရှင်ကား)က ချီးဘဲ ပါလား။Whatashit film that was!
ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်သော၊ မနှစ်မျို့စရာ၊ (vulgar, colloquial) Nasty; despicable.
သူ့ကို ချီးလိုပြုလုပ် လိုက်တာဘဲ။ That wasashit thing to do to him.
shit (third-person singular simple present shits, present participle shitting, simple past shit, shitted, or shat, past participle shit, shitted, shat, or shitten)
အညစ်အကြေး (ချီး)ထုတ်သည်။(ကံမလို, vulgar, colloquial) To defecate.
ဖင်ပေါက်မှ အညစ်တခုခု ထုတ်သည်။ (ကံလို, colloquial) To excrete (something) through the anus.
အရူးလုပ်သည်(သူတပါးကို)၊ လိမ်လည်ဖျားသည်။(ကံလို, vulgar, colloquial) To fool or try to fool someone; to be deceitful.
ဒါ ဒေါ်လာ ၁၂၀၀တန်တယ် (အံ့အားသင့်) - မင်း ငါကို လိမ်နေတာလား။ Twelve hundred dollars!? Are you shitting me!?
စိတ်ရှုပ်စေသည်။ (ကံလို, vulgar, colloquial, ဩစတြေးလျ) To annoy.
ဒီချီး(ကဲ့သို့)ကြော်ငြာက ငါ့ကို မျက်ရည်ကျစေသည်။ That ad shits me to tears.
(defecate): see also Wikisaurus:defecate
(try to fool): shit with
ပူပင်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ အထိန့်တလန့်ဖြစ်မှု စသည်တို့ဖေါ်ပြချက် - ဒီ အသုံးကို မသုံးမိခင်ကလေး သတိရလို့ (သို့) တခုခုကို ပထမအကြိမ် တွေ့မြင်ရလို့ (vulgar) Expression of worry, failure, shock, etc., often at something seen for the first time or remembered immediately before using this term.
ဟ ချီးဘဲ၊ ငါ့အိပ်ယာလိပ်ကို ငါလိပ်ဖို့ မေ့သွားပြီလို့ ထင်တယ်။ Shit! I think that I forgot to pack my sleeping bag.
မိုးပေါ်က အီတုန်းပါလား။ Holy shit!
ဟ၊ သောက်ပလုပ်တုတ် (အီအီတုန်း ဖြစ်ပြီ) Oh, shit!
မနှစ်မျို့ (သို့) အံ့အားသင့်မှုကို ပြသ၊(vulgar) To show displeasure or surprise.
သူ၏ ဆရာမကို - ဟ ဂွဘဲ - အိမ်စာကို အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ဒါ့အတွက် သူပြသာနာတက်လိုက်ရတယ်။ "Oh, shit. I left my home-assignment paper at home," she said to her teacher, which got her in trouble.
See also Wikisaurus:dammit
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=shit&oldid=845868" မှ ရယူရန်
အင်္ဂလိပ် ကံမလို ကြိယာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။